Nezve Shandura Offline Folda (OSTFaira
musha Products DataNumen Exchange Recovery Nezve Shandura Offline Folda (OSTFaira
Kana Outlook ichishandiswa pamwe chete neMicrosoft Exchange Server, unogona kuiisa kuti ishande pamwe neiyo Exchange mailbox pasina. Panguva iyoyo, Outlook ichaita kopi chaiyo yebhokisi rako retsamba paServer Server, inonzi offline folders, uye woichengeta mufaira remuno, iro rinonzi offline fodhi faira uye ine.ost faira yekuwedzera. OST ndicho chidimbu che "Offline Storage Tafura".
Paunenge uchishanda isingaenzaniswi, iwe unogona kuita zvese neefodhi isingaite senge iri bhokisi retsamba pane server. Semuenzaniso, unogona kutumira maemail ayo akaiswa mubhokisi reInternet rekunze, unogona zvakare kugamuchira mameseji matsva kubva kumamwe mabhokisi etsamba epamhepo, uye iwe unogona kuita shanduko kumaemail nezvimwe zvinhu sezvaunoda. Nekudaro, shanduko idzi dzese hadzizoratidzwe kubhokisi rako retsamba pane Shanduro server kusvikira iwe wabatana kunetiweki zvakare uye uchiyananisa mafirita ekunze neserura.
Panguva yekugadzirisa, Outlook ichabatana neiyo Exchange server kuburikidza netiweki, tevedzera shanduko dzese dzakaitwa kuitira kuti maforodha asiri pamhepo ave akafanana nebhokisi retsamba zvakare. Unogona kusarudza kuenderana chete yakatarwa dhairekitori, boka remafolda, kana ese maforodha. Faira regogi rinoshandiswa kurekodha ruzivo rwese rwakakosha pamusoro pekuwiriranisa, kuitira yako mareferensi gare gare.
Kubva Outlook 2003, Microsoft inosvitsa Cached Exchange Mode, iri chaizvo vhezheni yakavandudzwa yemapepa ekutanga asiri pamhepo. Iyo inoratidzwa mune inoshanda zvakanyanya nzira yekuwiriranisa uye zvirinyore mashandiro ekunze.
Zvepamhepo maforodha kana Akachengetedzwa Shanduro Mode zvine zvakwakanakira zvakati.
Ita kuti zvikwanisike kuti iwe ushande pamwe neako Shanduko bhokisi retsamba kunyangwe pasina maratidziro ekubatanidza aripo.
Kana njodzi ikaitika pane Shanduro sevha, senge sevha kubondera, server dhata huwori, nezvimwe, iyo isingawanikwe folda faira pakomputa yemuno ichine kopi yebhokisi rako reEngland, pamwe nezvimwe zvisingabvumirwe. Panguva iyoyo, unogona kushandisa DataNumen Exchange Recovery kudzorera most yezviri mukati meExchange mailbox yako nekutarisisa nekugadzirisa iyo data mune yemuno isingaenderane folda faira.
Dhairekodhi dhairekodhi (.ost) faira, senge Outlook yemunhu mafaira (.pst) faira, inowanzo kuve mune yakatsanangurwa folda.
ZveWindows 95, 98 uye ME, dhairekitori iri:
C: WindowsApplication DhataMicrosoftOutlook
C: WindowsProfilesuser zitaLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook
ZveWindows NT, 2000, XP uye 2003 server, dhairekitori iri:
C: Zvinyorwa uye Zvimiro mushandisi zitaMagariro ZvirongwaKushandisa DhataMicrosoftOutlook
C: Zvinyorwa uye Mazita emushandisi zitaApplication DhataMicrosoftOutlook
ZveWindows XP, dhairekodhi iri:
C: Zita revashandisiAppDataLocalMicrosoftOutlook
ZveWindows Vista, dhairekitori iri:
C: Useruser zitaLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook
ZveWindows 7, dhairekitori iri:
C: Zita rekushandisaAppDataLocalMicrosoftOutlook
Iwe unogona zvakare kutsvaga iyo faira "*.ost”Mukomputa yako kuti uwane nzvimbo yefaira.
The OST faira ndiyo kopi yemuno yebhokisi rako reExchange, iro rine yako most data rakakosha rekutaurirana neruzivo, kusanganisira maemail, maforodha, posts, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali, zvinyorwa, nezvimwe matambudziko akasiyana siyana nebhokisi rako retsamba kana maforodha ekunzesemuenzaniso, iyo Exchange server inopunzika kana iwe haugone kuwiriranisa izvo zvekushandurwa kwepasirese neserura, tinokukurudzira kuti ushandise DataNumen Exchange Recovery kudzoreredza data rese mairi.
Microsoft Outlook 2002 uye shanduro dzekare dzinoshandisa yekare OST faira fomati ine muganho wehukuru hwefaira hwe2GB. The OST faira rinozoora kana rasvika kana kudarika 2GB. Unogona kushandisa DataNumen Exchange Recovery kuongorora iyo yakawandisa OST faira uye ishandure ive PST faira mune Outlook 2003 fomati iyo isina 2GB saizi saizi kurema, kana ripatsanure rive maPST mafaera madiki pane 2GB kana iwe usina Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro dzakaiswa.